Kolikoly Ao Rosia Tazanina Avy Eny Ampisidinana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Novambra 2013 15:21 GMT
Sarintanin'i Navalny vaovao ifandrimbonana, “Misy Manidina Eo Ambonin'ny Akanim-panjakana Ofisialy” 27 Novambra 2013, pikantsary.
Namely mpanao politika dimy malaza indray ilay bilaogera sady mpikatroka manohitra ny kolikoly Alexey Navalny, niampanga azy ireo ho mpandrayo kolikoly sy tsy nanambara ny fananany tany aman-trano, ka anisan'izany ireo harembe tranobe fahagola (manoirs) miorina ivelan'i Moskoa. Tamin'ny lahatsoratra [ ru ] lavabe tao amin'ny LiveJournal, nivoaka tamin'ny 27 Novambra 2013 i Navalny no nanazava ny tsy fahampiana na lainga tamin'ny fanambaram-pananana nataon'i Nikolai Ashlapov , Igor Rudensky, Sergueï Neverov, Sergueï Prikhodko, ary Vyacheslav Volodin (mpikambana ao amin'ny Rosia Mitambatra avokoa izy rehetra ireo na mpikambana ambony ao amin'ny governemanta federaly) tamin'ny fandraketana ireo fananany amin'ny anaran'ny fianakaviana sy ny orinasa iaraha-mitantana.
Ankoatra ny bilaoginy manazava amin'ny antsipirihany mikasika ireo trano goavambe an'ireo mpanao politika, nanambara ny fitsanganan'ilay habaka [ru] vaovao tamin'ny alalan'ny fikambanana sivika naoriny, Fikambanana Manohitra ny Kolikoly ihany koa i Navalny, izay hahafahan'ireo mpamaky mijery sarintany ifandrimbonana mitondra ny lohateny hoe “Misy manidina eo ambonin'ny Akanim-panjakana Ofisialy.” Isaky ny mitendry (manindry) ny iray amin'ireo tranobe dimy hadihadiana dia ahitana ny antontan'isan'ny tsirairay momba ireo fananana, ary manazava ny habeny amin'ny voambolana mitovitovy. ( Ohatra: mitovy amin'ny kianjan-dranomandry fikorisarisana (patinoire) miisa sivy ny tanin'i Neverov; eo ho eo amin'ny in-telon'ny kianja filalaovana baolina ny velaran-tanin'i Volodin; dia toy izany hatrany).
Avy hatrany dia namaly ireo fiampangan'i Navalny ilay bilaogera mpomba ny Kremlin sady tanora mpikatroka, Kristina Potupchik. Taminà lahatsoratra [ru] tao amin'ny LiveJournal, nilaza i Potupchik fa mampiseho mazava ny fanambaram-pananana nataon'i Volodin fa manankarena ihany izy ka nahafahany nividy ireo fananana asehon'ny fanadihadian'i Nalvany. Miampanga an'i Navalny ho mpihatsaravelatsihy ihany koa izy, ary nilaza fa mitarika hetsika manohitra ireo Rosiana manankarena i Nalvany, ary miaro ireo namany manokana mpanankarena, tahaka ny talen'ny Alfa Group teo aloha, Vladimir Ashurkov sy ilay mpahay toekarena Sergei Guriev.
Tsy eo am-pamadihana azy ireo [Ashurkov sy Guriev] i Nalvany. Amin'izany, mampatsiahy ahy mafy an'i William Browder, izay nanankarena tao Rosia tamin'ny fanomezana fahantany ireo orinasam-panjakana hotantanin'ny tsy miankina nandritra ny taompolo 1990 ilay bilaogera [Navalny], ary_rehefa nikatona ny magazay_nanomboka nidradradràdra momba ny kolikolin'ny governemanta amin'izay.
Nanamarika [ru] tao amin'ny Facebook ilay mpanao gazety Ekaterina Vinokurova fa ninia tsy te-hahalala ireo fanambaran'i Navalny ny fampahalalam-baovao Rosiana, na dia “lohahevitra politika anisan'ny nibahana nandritra ny tontolo andro aza ny bilaoginy.” Taminà lahatsoratra [ru] ho an'ny Znak.com, nilaza loharanom-baovao tsy fantatra anarana avy ao amin'ny Kremlin i Vinokurova, izay niaro ny fangaraharan'ny fananan'i Volodin, na dia tamin'ny feo somary manesoeso aza no nanaovany izany.
Nitatitra [ru] ny Gazeta.ru taty aoriana tamin'io andro io hariva fa efa mitodika amin'ilay antoko politika antsoina hoe « Fiaraha-mizotran'ny vahoaka ” – anarana antoko tsy mety voasoratr'i Navalny efa indroa izay – i Rosia. Na dia izany aza, tsy an'i Nalvany ny Antoko vaovao Fiaraha-mizotran'ny Vahoaka, fa an'ilay antoko madinika fantatra taloha tamin'ny anarana hoe “Tanindrazan'i Neny” ( Родная страна ). Io vondrona io dia teraka avy amin'ny tetipanorona ara-politikan'i Andrei Bogdanov, izay tompon'andraikitra tamin'ny famoronana antoko politika marobe natao hamitahana miaraka amin'ny sehatra maro ary anarana natao hampifangaro zavatra eo amin'ny mpifidy ary natao hamonoana ny fanohanana ara-politika ny mpanohitra mandritra ny fifidianana.
Ao amin'ny Twitter i Navalny no nanao kibokibo [ru] fa ny nanaovana ilay fanomezana anarana indray dia valifatin'i Volodin tamin'ny famoahana ilay “Misy Misidina Ambony” miresaka momba ireo trano lehibe ivelan'i Moskoa:
Araka ny fahazoako azy, io no valiny nataon'i Volodin amin'ilay fikambanana mpanao asa soa tamin'ny “nahitana voalohany ny dacha.”